संगीतले ब्लड प्रेशर नियन्त्रण गर्छ, कसरी ? « Deshko News
फिल्ममा ८ मिनेटको दृश्यको लागि ७० करोड भारु !
काठमाडौं बाहुबली फिल्मका स्टार प्रभास र बलिउड नायिका श्रद्धा कपूर एउटै फिल्ममा देखिने भएकाछन्।भारतीय फिल्म
करिश्मा अर्को हप्ता नेकपा प्रबेश गर्ने
काठमाडौं। चलचित्र नायिका करिश्मा मानन्धर अर्को हप्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रवेश गर्ने निश्चित भएको छ
चलचित्र ‘पायल’ आउँदै
काठमाडौ नेपाली कथानक चलचित्र ‘पायल’को मंगलबार छायांकन सकिएको छ । काठमाडौको विभिन्न ठाउँमा छायांकन भएको
धरान । गरिमा डान्स सेन्टर धरानले आयोजना गरेको ‘चिल्ड्रेन्स ट्यालेन्ट हन्ट २०१९’ को विजेता सिनियर